Toos Side Side
Dhammaan Daasadaha Balaastikada ah
Dheji Korantada Elektaroonigga ah
Baaldi tirtiro qoyan
Baasaboorka Baaldiga / Baaldi
Xaraashka caaga ah
Sida loo martigaliyo habeenka filinka Halloween ee ugufiican 2020
Hubso inaad haysatid baahiyahan foosha xun ee gacanta ku jira habeenkii filimka Halloween, oo ay ka buuxaan boosas iyo aragtiyo Halloween ah waa Sabtida sanadkaan, taas oo waqti badan u reysa dhaqdhaqaaqyada cirfiidka. In kasta oo habka khiyaanada ama daaweynta loo kala duwanaan karo oo xitaa ku xirnaan karto halka aad ku nooshahay, macnaheedu maahan inaad awoodid ...
Shuruudaha tayada iyo sifooyinka foosto caag ah
Qalabka foostada balaastigga ah badanaa waxaa laga sameeyaa polyetylen, polyester iyo caagag kale, waxaana inta badan loo isticmaalaa in lagu hayo astaamaha glacial acetic, tert butyl peroxide, badeecooyinka halista ah ee batroolka, aashitada iyo dawooyinka sunta dilaaga ah ee alkali, iwm. Waxay leedahay astaamo aad u wanaagsan, sida jilicsan, oo aan ahayn daxal, ...
Hawlaha iyo astaamaha baaldiga balaastigga ah
Foostooyinka balaastikada ah inta badan waxay ka sameysan yihiin polyetylen, polypropylene iyo caagag kale (qaab dhismeedka: cusbada synthetic, plasticizer, stabilizer, pigment) adoo ku garaacaya dharbaaxo iyo wax isku duro oo ku muda. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa baakadaha dibedda ee dareeraha iyo maaddada adag ee warshadaha kala duwan sida kiimikada ...
Maxaan u fiirsanaa marka la isticmaalayo foostada la isku duro ee caaga ah
Markii la isticmaalo, waxaa lagu aqoonsan karaa habka soo socda: habka dabka. Marka la barbardhigo foosto caag ah oo PE ah, iska caabinta kuleylka foostada caaga ah ee 'PP' wax yar ayaa ka wanaagsan, laakiin si kasta oo heerkulku u sarreeyo, waxaa jira halista jilicsanaanta iyo dhalaalida, sidaa darteed heerkulka sarreeya waa in laga fogaadaa sida f ...
Cinwaanka: C5 Hutang Sayniska iyo Teknolojiyada Warshadaha Warshadaha Guangdian East Road Changzhou Jiangsu, Shiinaha
Khadka tooska ah: 0086-13337883908,